Best 15 ngwa ọdịnala n'ihi iOS 8
iOS 8 N'ikpeazụ-apụta, na-eweta egwu ọhụrụ atụmatụ na nkwalite ya. Ugbu a,-atọ ndị ọzọ na-eji ngwa ụlọ ọrụ na-enwe ike kụrụ ha keyboard ngwa Apple App echere iOS 8 ọrụ, na iwekota ha ngwa tacto ID mgbe na-abịa ego na paswọọdụ. Ebe a, m chịkọba top 15 ngwa ọdịnala na-agwa gị nke keyboard ngwa bụ ihe kasị mma na ihe ngwa ugbu a na-jikọrọ Metụ ID.
Part 1. Best 7-atọ ndị ọzọ Keyboard ngwa ọdịnala n'ihi iOS 8
Part 2. 8 kwesịrị-nwere iOS égwu na Touch ID Nkwado
Ebe ọ bụ na Apple ọkwa na iOS 8 na-emeghe ruo-atọ ndị ọzọ keyboard ngwa, ọtụtụ ụlọ ọrụ ike ma ọ bụ melite keyboard ngwa. M chọọ na internet na-ahụ kasị mma 7 keyboard ngwa ọdịnala n'ihi gị. Ugbu a, na-ahapụ 'nwere anya na ha.
SwiftKey Keyboard a na-eji a nnọọ ewu ewu keyboard ngwa n'ihi na Android ngwaọrụ. Ugbu a, ọ na-abịa maka iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka.
SwiftKey Keyboard-ahapụ ị pịnyere na gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka na a ngwa ngwa na mfe ụzọ. Ọ na-enye gị ụdị aro n'ụzọ ziri ezi dị ka gị ụdị àgwà. Ọ bụrụ na ị asụpe na-ezighị ezi okwu, SwiftKey Keyboard ga-akpaghị aka gbazie ha. Ọ na-enye gị ike pịnye ke ụzọ gị. Dị nnọọ slide si leta akwụkwọ ozi na SwiftKey eruba. Ọzọkwa, ọ na-enye gị na asụsụ abụọ. Ọ pụtara na, i nwere ike pịnye ndammana site na otu launguage ọzọ.
Mụta ihe banyere SwiftKey >>
Dị ka SwiftKey, Swype bụkwa a n'ọtụtụ ebe na ngwa ọdịnala n'ihi Android ngwaọrụ. Ugbu a, ọ abịarute na iOS 8 ngwaọrụ. Swype-enyere gị aka tinye okwu na ihuenyo ngwa ngwa otú ka imput karịa 40 okwu a nkeji.
Ọ na-amụta site na ị na awade nwere ọgụgụ isi na-ekwu, na-enye gị ohere ịgbakwunye okwu na ọkọwa okwu. Mgbe ị pịnyere, ọ na-enye gị ụdị nhọrọ. Mgbe ị pịnyere na-ezighị ezi okwu, ọ ga-akpaghị aka gbazie ya. Ke adianade do, ọ na-enye gị ise keyboard gburugburu, ya bụ Dard, Ìhè, Earth, Sun na ájá. Ị nwere ike ịhọrọ onye ọ bụla n'ime hazie gị keyboard isiokwu
Mụta ihe banyere Swype >>
Fleksy na-regareded dị ka ndị kasị keyboard ngwa na-abịa iOS 8. Ọ na-ahapụ ị na-enwe ngwa ngwa na ezi ụdị, akpa dịghị achọ. Ọ na-enye gị karịa 800 Emoticons na Emoji, otú i nwere ike iji ha ka ha agba okwu gị kpam kpam. Ọ bụrụ na ị pịnyere na-ezighị ezi akwụkwọ ozi, Fleksy ga ịchọpụta na-amaghị ihe ị na-ekwu ma na-egosi gị ikike ụdị. E wezụga, ya n'ụzọ zuru ezu na-akwado 40 asụsụ, na-enye gị ohere mfe ịgbanwee n'etiti asụsụ mgbe dee.
Mụta ihe banyere Fleksy >>
TouchPal bụ a keyboard ngwa ọdịnala na ogbugbu / swipe ọsọ ọsọ. Ọ na-enye gị ka ị na pịnye na ihuenyo ngwa ngwa na n'ụzọ dị mfe. Ọ na-ewetara ndị kasị mma dee ahụmahụ, dị ka slide ọsọ ọsọ, na-esote okwu amụma na ọtụtụ ndị ọzọ salient atụmatụ. Wezụga ya, ọ na-enye gị karịa 800 emojis, otú i nwere onwe gị ikwupụta natually.
Mụta ihe banyere TouchPal >>
Dị ka otu n'ime keyboard ngwa na ga-abịa n'ihi anyị mgbe iOS a tọhapụrụ, Adaptxt bụ nnọọ kensinammuo. Ọ na-aghọta gị dee stype na-enye gị okwu nke ọzọ amụma. Mgbe na iji kọmputa ede na-ezighị ezi akwụkwọ ozi, Adaptxt na-enye gị edozi aro. E wezụga na, ọ na-akwado ịmafe n'etiti asụsụ dị iche iche, na-enye Contextual amụma ya na SMS asụsụ na keyboard customization na na.
Mụta ihe banyere Adaptxt >>
A ọkọlọtọ keyboard ewe ihe fọrọ nke nta ọkara nke ihuenyo, nke mgbe ụfọdụ bụ bụghị enyi na enyi. Aiming na nke a, Minuum na-azọrọ na-enye gị ma a na-sized keyboard na a obere, belata-size version. Minuum dị maka iPhone, iPad ma ọ bụ iPod zọsara na-agba ọsọ iOS 8. Ọ na-ebubo $1.99. Ọ na-ahapụ ị pịnyere ngwa ngwa na-enweghị nchegbu banyere mistyping, ekele ya smart akpaaka-mgbazi na-amụta site na gị dee àgwà.
Ọ gbapụrụ ọsọ gị dee ịmụta ihe n'aka okwu gị n'ịgwa, okwu ndepụta, na asụsụ ojiji nakawa etu esi. E wezụga, ị nwere ike slide ekpe ma ọ bụ aka nri ka ihichapụ a okwu ma ọ bụ tinye a ohere. Amagbu? Ị nwere ike ịga Apple App Store ibudata ya n'ihi na gị iOS 8 ngwaọrụ.
Mụta ihe banyere Minuum >>
PopKey azọrọ na ọ na-ewebata ụwa mbụ animated GIF keyboard maka gị. Na ya collection, E nwere ọtụtụ puku gifs nke i nwere ike iji kpamkpam mgbe ịkpọtụrụ na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị ike ọ bụla animated GIF, ị nwekwara ike bulite ya ka collection iji hazie gị keyboard. Wezụga ya, ọ classifies na gifs dị ka ha edemede, otú i nwere ike ịhụ ha conveniently. Nke a ga-n'ezie na-eme gị dee na-akpa ọchị, na-ekpo ọkụ. Ọ na-abịa ngwa ngwa
Mụta ihe banyere PopKey >>
iOS 8 ukwuu enhances iPhone, iPad na iPod aka nchekwa na mma. Ugbu a, ọ ga-emepe Touch ID mkpisiaka mmetụta-atọ ndị ọzọ na-eji ngwa Company. N'okpuru ebe a bụ ihe kasị mma 8 iOS ngwa ọdịnala na-akwado Touch ID.
Enweta ihe ngwa ọdịnala na iPhone si ebe a >>
1. Amazon - A Big Platform ịzụta ihe ọ bụla
2. LastPass - A Paswọdu Management App
3. Mfe - Ije Ozi dị ka ihe Onlike Bank
4. Day One - Record ọ bụla oge ná Ndụ Gị
5. Evernote - A Great Cheta-ewere App
6. Meziri VNC - nweta gị na kọmputa site na n'ebe ọ bụla
7. Igwefoto Plus - Weghara Remotely na AirSnap
8. nyocha Pro - atụgharị gị iPhone / iPad dị ka ihe nyocha
Amazon bụ a na saịtị na-enye gị tọn tousands nke ngwongwo. Ịnwere ike ịchọgharị, search, ele ngwaahịa Ama, ịgụ na ide commnents na ịzụta gị chọrọ ngwaahịa. Dị nnọọ banye maka ya, na ị pụrụ ịzụta, na-ele gị cart, ma dee ihe n'ihi na gị ngwaahịa.
Enweta ihe Ama banyere Amazon ngwa n'ihi na iOS 8 >>
LastPass bụ a paswọọdụ njikwa na-azọpụta gị niile okwuntughe na ígwé ojii, na awade gị mfe na mma-ohere ha na kọmputa na gị iPhone, iPad na iPod aka. Dị na-echeta na LatsPass akaụntụ, niile okwuntughe gaghị efu. Ọ na-enye gị ka ị na igbachi ala LassPass akaụntụ na multifactor Nyocha. Ọzọkwa, ọ na-ahapụ gị ka ala ndetu iji chekwaa gị kaadị akwụmụgwọ, memberships & ndị ọzọ mwute data.
Enweta ihe Ama banyere LastPass ngwa n'ihi na iOS 8 >>
Mfe bụ ihe online akụ ngwa. Ọ na-enye gị mfe ohere gị ichekwa ego na bank ọmụma site Touch ID. Mgbe ị zụrụ ihe, ọ pụrụ egosi na ị spendings na sekọnd. Site n'ịhazikọta gị spendings, ị nwere ike na-erepịaghị esikwa zere n'elu-oriri. Ọ bụrụ na ị chọrọ enyemaka ụfọdụ, i nwere ike ederede ya site na iji ngwa, na awa ole na ole, ị ga-anabata.
Enweta ihe Ama banyere Mfe ngwa n'ihi na iOS 8 >>
Day One (Journal / Notes / Abamuru) bụ dị ka onye na online edetu, nke dere niile ndụ gị, si na-adịchaghị mkpa ka ihe nnukwu ihe. Day Otu nwere elegent ma dị ọcha interface, na-eme ndụ Ndekọ a ụtọ. Ọ na-offes multi-markdown ederede formatting agba gị ndekọ. Mgbe ndekọ, ị nwere ike igbachi ya iji chebe gị nzuzo, na Ị kpọghee ekwt ya Touch ID. Ọ bụrụ na-amasị gị, ị nwekwara ike iji Dropbox ma ọ bụ iCloud ka mmekọrịta Ndenye gafee niile gị iOS ngwaọrụ, ma ọ bụ nkwado ndabere na mpaghara bipụta ya.
Mụta ihe banyere Day Otu ngwa n'ihi na iOS 8 >>
Dị ka aha ya na-egosi, Evernote bụ ihe dị mfe na-eji na-egbu Cheta na-eme ngwa n'ihi na iOS 8. ya, ọ bụ otu nke achicha na-esi gị ndetu na niile iDevice ị na-eji. Ọ syncs niile ndetu site na kọmputa na iDevices ị na-eji na-azọpụta ha na ígwé ojii. Ke adianade do, ọ na-enye gị ka ọ na ndetu, kpọọ photos, ndekọ ọdịyo na video ndetu na ndị ọzọ. I nwekwara ike na-agụ ọdịnaya, n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla.
Mụta ihe banyere Evernote maka iOS 8 >>
Meziri VNC bụ ike ihuenyo nkekọrịta na ngwa na-enyere gị aka ịchịkwa gị Windows, Mac ma ọ bụ Linux PC safelywhen na ị bụghị n'ihu ya. E wezụga na, na iCloud, ị nwere ike mmekọrịta meziri gị dum iOS ngwaọrụ. Ọ na-enye gị na meziri 'scrollable mkpirisi toolbar, nke mere na ị ga-enwe mgbe nile ọkacha mmasị gị mkpirisi emechi mgbe ị kwesịrị ha.
Mụta ihe atụmatụ banyere Meziri VNC ngwa n'ihi na iOS 8 >>
Igwefoto Plus na-enye gị oké ngwá ọrụ na-zuru okè foto site kwado, ilebara na composing. Ọ na-enye gị ka ị na Ome foto na vidiyo site ime akara site na iji AirSnap. Mgbe agbapụ, ọ adjusts amamihe ìhè, na-eme ka foto ma ọ bụ video n'ụzọ doro anya. N'otu oge ahụ, ọ na-enye gị na dị iche iche na-elekwasị anya ụdịdị ịhọrọ site na weghara crips gbaa.
Mụta ihe banyere Igwefoto Plus ngwa n'ihi na iOS 8 >>
Nyocha Pro bụ ihe magburu onwe ngwa na ngwa ngwa ike iṅomi ogwe ọcha, receipts, akwụkwọ ndetu, na ihe ọ bụla multipage akwụkwọ na gị iPhone ma ọ bụ iPad, na-azọpụta PDF faịlụ. Gị niile na-enyocha kwa nwekwara ike uploaded gị Dropbox, Evernote, Google Drive ma ọ bụ ndị ọzọ ka ịnweta ha n'ebe ọ bụla na n'oge ọ bụla. Na Ọzọkwa, mgbe ị na-foto gị iPhone, ma ọ bụ iPad, foto ndị ga-enweta na gị ndị ọzọ iOS ngwaọrụ na sekọnd.
Mụta ihe banyere nyocha Pro ngwa n'ihi na iOS 8 >>
Atụmatụ I Kwesịrị Ịmara tupu iOS 8 ọjọọ
Update iOS 8 on iPhone / iPad / iPod aka
Nchọpụta nsogbu banyere iOS 8 Update
Speed ​​Up Your iDevice na-agba ọsọ iOS 8 Fast
Olee otú ndabere iPad tupu iOS 8 ọjọọ
Olee otú ndabere iPod aka maka iOS 8 ọjọọ
Olee otú ndabere iPhone tupu iOS 8 ọjọọ
Naghachi SMS on iPhone mgbe iOS 8 ọjọọ
Downgrade Your iDevice si iOS 8 ka iOS 7
Nyefee na ọdịnaya site Old iPhone ka iPhone 6
Olee otú Idozi Apple White ihuenyo nke Ọnwụ
1 Pịa Nyefee Android ka iPhone 6
Mfe Nyefee SMS, Music, Video, Photos, Kalinda na Ndi ana-akpo si iOS ka Sam
Ọ bụla Issues Banyere Spotify iOS Chọta gị Solutions Lee
2 Mfe ụzọ iji Hichapụ iOS 7 duplicated Photos
iOS 7 Data Recovery - Olee otú naghachi Lost Data mgbe iOS 7 ọjọọ
> Resource> iOS> Best 15 iOS 8 égwu Iji na-enwe Ebube iOS Life